ဗိုက်မှာစုနေတဲ့အဆီတွေကို ချချင်ရင်ဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ။ - Hello Sayarwon
ဗိုက်မှာစုနေတဲ့အဆီတွေကို ချချင်ရင်ဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ။
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ 11 နာရီ အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ခုနောက်ပိုင်း လူနေမှုပုံစံတွေဟာ အထိုင်များပြီး စားစရာသောက်စရာတွေကလည်း ပေါများလာတာကြောင့် နောက်ပိုင်းလူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓါ အချိုးကျလှပတာထက်နေတဲ့သူတွေက ပိုများနေပါတယ်။ ဒီလို ပူလာတဲ့ ဗိုက်ကိုဘယ်လိုချချ မကျတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ ပူလာတဲ့ ဗိုက်ကို ဘယ်လိုချချ မကျရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဗိုက်ပြူခင်းကို အဓိက ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မသိတာကြောင့်ပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပူနေတဲ့ ဗိုက်ကိုချဖို့အတွက် ဘယ်လိုကနေစပြီး ဗိုက်ပူလာလဲဆိုတာကိုတော့ သိဖို့လိုတယ်နော်။ ။
ဗိုက်မှာစုတဲ့ အဆီ ၅ မျိုးနဲ့ သူတို့ကို ဘယ်လိုချရမလဲ ။ ။
၁ ။ ဗိုက်မှာ အဆီစုခြင်းကိုဖြစ်စေတာက ဘီယာ ဗိုက်ပါ။ ။
ဘီယာတို့ အရက်တို့ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို နှေးစေတဲ့အပြင် အသည်းကနေ အဆီလောင်ကျွမ်းစေတဲ့နှုန်းကိုလည်း နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရက်တို့ ဘီယာတို့မှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများနေရခြင်းဟာလည်း သ့င် ဗိုက်ကို ပူလာစေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကယ်လိုရီကလည်းများ၊ ဝင်လာတဲ့ ကယ်လိုရီ တွေကိုလည်း ပြန်ပြီးမလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာကြောင့် ဘီယာဗိုက်ဆိုတာ ချဖို့ အလွန်ခက်တဲ့ အဆီတစ်မျိုးပါ။ ။
ဘီယာဗိုက်ကို ချဖို့အတွက်ဆို ဘီယာတို့ အရက်တို့ကို မသောက်ဘဲနေမှရမှာပါ။ အရက်ဖြတ်မယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်၊ အသီးအရွက်များများစားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းမာနေတဲ့ ဘီယာဗိုက် ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ။
၂ ။ ကလေးမွေးပြီးနောက် ဗိုက်မှာ အဆီစုခြင်း ။ ။
ကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းက ကလေး အာဟာရမရှိမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ၂ ယောက်စာပေါင်းစားခဲ့လို့ တက်လာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ၊ အဆီတွေက ကလေးသာထွက်သွားပေမယ့် သူတို့ကတော့ ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ အင်ဆူလင် ပမာဏကလည်း မြင့်တက်လာတာကြောင့် ဗိုက်မှာ အဆီတွေ ပိုစုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီးနောက် ပူလာတဲ့ ဗိုက်ကို ပြန်ချပ်စေဖို့ဆိုရင် ဗိုက်စည်းပေးရပါမယ်။ ထိုင်နေတာထက်စာရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် လမ်းလေးဘာလေး လျှောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးက ဖြည့်စွက်စာစားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မေမေတို့ ကိုယ်ခန္ဓါ အချိုးအစားကို ပြန်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ Diet Plan စသင့်တယ်နော်။
၃။ စိတ်ဖိစီးမှု များလွန်းရင်လည်း ဗိုက်မှာ အဆီစုတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးပြီဆိုတာနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကော်တီစုန်း ဟော်မုန်းက သင့်ဗိုက်ကို အစုစေတဲ့ အဓိက တရားခံပါ။ တစ်ချို့ရှိတယ်လေ။ အစားအသောက်တွေကို စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေတဲ့ အရာအဖြစ် အသုံးချတာ။ ကိုယ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကလည်းများ၊ အစားစားလို့ကလည်း ကောင်းဆိုရင်တော့ ဗိုက်မှာ အဆီစုတော့မှာ လုံးဝကို အသေအချာပဲနော်။ ။
စိတ်ဖိစီးမှု ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဗိုက်အဆီကိုချချင်ရင်တော့ ရှင်းပါတယ်.။ စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့အောင်နေ၊ အစားတွေလျှော့စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်။ ။
၄ ။ ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းဓာတ်တွေ မညီမျှခြင်းကြောင့် ဗိုက်မှာ အဆီစုလာခြင်း ။ ။
သင်ဟာ အမျိုးသားဆိုရင်တော့ testosterone 300 ng / dl အောက် ရောက်လေလေ သင်ဝလာလေလေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ testosterone 70 ng / dl ထက်များလေလေ ဝလာလေလေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟော်မုန်းတွေကို ထိန်းညှိဖို့အတွက်ဆို omega3နဲ့ omega6တို့ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားပေးပါ။ အသီးအရွက်တွေ များများစားပါ။ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို ရှောင်စားပါ။
၅ ။ ဗိုက်လေပွခြင်းကြောင့် ဗိုက်ပူလာခြင်း ။ ။
မနက်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗိုက်ကလေးက ချပ်နေတတ်ပြီး ကြာလာလေလေ ဗိုက်ကလေးက ဖောင်းလာလေလေဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါဟာ ကိုယ်စားလိုက်တဲ့ အစားတွေကြောင့် ပူလာတဲ့အပြင် အစားအသောက်တွေကို ခြေဖျက်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ gas တွေ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လေပွလို့ ပူလာတဲ့ ဗိုက်ကို ပြန်ချဖို့ဆို သင့်အူတွေကို အားပြည့်စေတဲ့ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားပါ။ အစာကြေလွယ်အောင် အစာကို နည်းနည်းနဲံအကြိမ်များများစားပါ။ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာတွေစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပေးပါ။
ကဲ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အထဲမှာ ကိုယ်က ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါတာလဲဆိုတာ သေချာသိပြီါ်တဲ့ သကာလ ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလေးတွေကိုလည်း လေ့လာပြီးတော့ ပူနေတဲ့ ဗိုက်လေးတွေ အမြန်ဆုံး ကျနိုင်ကြပါစေ ။ ။
5 Types Of Bellies And How To Get Rid Of Them https://betterme.world/articles/5-types-of-bellies/ Accessed Date Jan 25, 2019
Beer belly https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/beer-belly Accessed Date Jan 25, 2019
Everything you need to know about your post-pregnancy belly https://www.babycenter.com/baby/postpartum-health/post-baby-belly-how-long-you-might-look-pregnant_1152349 Accessed Date Jan 25, 2019
Stress, Cortisol and Abdominal Fat https://www.stress.org/stress-cortisol-and-abdominal-fat Accessed Date Jan 25, 2019
What causesahormonal belly? https://www.medicalnewstoday.com/articles/hormonal-belly#:~:text=Sometimes%2C%20excess%20fat%20around%20the,known%20as%20a%20hormonal%20belly. Accessed Date Jan 25, 2019
ဗိုက်ပူနေသူတွေ အဆီကျစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ